Shiinaha leh PCBA saxanka dhejiska qayb soosaarayaasha iyo alaableyda | Chapman
✭ Tani waa qayb balaastig ah oo loo isticmaalo in lagu hagaajiyo guddiga PCBA, si loo ilaaliyo PCBA-ga isu dheellitiran loona hubiyo xasilloonida calaamadda gudbinta. Shuruudaha qaybtan balaastigga ah waa kuwo aad u sarreeya, saxsanaanta qaybaha sheyga caagguna waa inuu noqdaa 0.02mm. Marka, haddii dhowr meelood oo xiriir ee PCBA-ga ay go'an yihiin, wax soo saarku ma noqon karo xagal qabyo ah, caaryada waa in loo qaabeeyaa loona soo saaraa hab Slider ah.
✭ Qalabka PC-ga ee u adkaysta heerkulka sare ee loo isticmaalo qalabkan balaastigga ah waa qalab si caadi ah loogu isticmaalo nalalka baabuurta. Qalabkani wuxuu leeyahay faa'iidooyinka cillad yar, xasiloonida wanaagsan, iska caabinta heerkulka sare iyo iska caabinta qabow.
✭ Qaab-dhismeedkan qaab-dhismeedku wuxuu qaadanayaa heerka 'HASCO'. Qalabka Core waa 1.2343 bir adag. Qaab dhismeedka caaryadu waa qaab dhismeed aad u adag, oo u baahan in la isticmaalo isweydaarsiga isweydaarsiga si loo soo saaro afar qaybood oo kala duwan. Shayga alaabtu waa PC, dushana wuxuu u baahan yahay inuu noqdo Boolish 600. Shuruudaha saxnaanta cabbirka alaabtu waa +/- 0.02. Waqtiga bixinta caaryada waa 38 maalmood, iyo wareegga duritaanka waa 27 ilbiriqsi. Caaryada ayaa la tijaabiyey laba jeer oo keliya, macmiilkuna wuxuu naga codsaday inaanu diyaarino dhoofinta warshadda wax lagu duro ee Jarmalka.
Qaab MAYA. CPM-191018
Geedi-socodka Dhammaystirka Dusha sare Polish- # 600
Qalabka caaga ah PC
Miisaanka qaybta 1.5 g
Cabbirka qaybta 32.00 X 18.50 X 18.1 mm
Codsiga Elektaroonig ah
Cabirka caaryada 296 X 346 X 326 mm
Magaca caaryada Xagasha xagalka
Dalool caaryada 1 * 2 (Adeegso isweydaarsiga sarrifka si aad uhesho afar qaybood)
Orodyahan orod qabow ee dhinaca Iridda
Wax caaryada 1.2343 / 1.2312 / 1.2767
Waqtiga Hogaaminta 38 maalmood
Qaab Wareega Waqtiga: 27-kii
Lacag bixinta TT
Qaybtan qolofta balaastigga ah waxaa badanaa loo adeegsadaa inay ku xirnaato nidaamka gawaarida gawaarida. Qolofta wareejintu waa inaanay qalloocin ama cabirku ka baxsan yahay dulqaadka, sheyguna waa inuu ahaadaa mid dabka diidan oo heerkulkiisu sareeyo. Hubso in gudiga wareeggayagu uu xasilloon yahay oo aysan sahlaneyn in gudaha loo guuro.
Iyadoo aan loo eegin sanduuq kasta oo hagaajinaya guddiga, tayada sanduuqa caaggu waa mid aad u wanaagsan. Waxaan ku sameyn doonaa falanqeyn iyo qiimeyn ku saleysan qolofka 3D ee aad bixiso. Kooxdayada farsamada waxay bixin karaan adeegyo loogu talagalay hagaajinta alaabada. Iyadoo loo marayo falanqeyn farsamo oo hordhac ah, waxaan ku xaqiijin karnaa in taariikhda keenista iyo tayada ay tahay mid qumman oo si habsami leh u dhameystirtay
Hore: Miirayaasha saliida
Xiga: 7day sanduuqa kaniiniga